Vashani veAir Zimbabwe Voenderera Mberi Vachikanda Mapadza Pasi
Ndira 06, 2012
Vashandi vekambani yeAir Zimbabwe vari kuramba kudzokera kumabasa vachiti vanoda kutanga vabhadharwa mari dzavo. Kuramwa mabasa kwevashandi ava kunonzi kwava nemasvondo manomwe, uye kuri kuwedzerawo matambudziko ari kusangana neAir Zimbabwe.
Sachigaro vebhodhi reAir Zimbabwe, Va Jonathan Kadzura, vaudza Studio7 kuti vashandi vane kodzero yekuramwa kana vasingapihwe mari dzavo dzemihoro. Va Kadzura vanotiwo hurumende inofanirwa kubatsira kambani yeAir Zimbabwe kuitira kuti ibude mumatope mairi.
Vanotiwo bhodhi ravo riri kuedza zvose zvarinogona kuitira kuti rigadzirise zviri kunetsa mukambani ye Air Zimbabwe.
Vashandi veAir Zimbabwe vanopfuura zana vakaratidzira panhandare yendege neChina neChishanu muHarare vachiti bhodhi rekambani iyi riri kutadza kugadzirisa zviri kunetsa.
Asi gurukota muhofisi yemutungamiri wehurumende, Va Gorden Moyo, vanoti Air Zimbabwe yava chisekeso chenyika, nokudaro inofanirwa kuti itorwe nevane mari kuitira kuti vafambise zvinhu mukambani iyi. Va Moyo vanoti Air Zimbabwe inofanhirwa kumira yega sekambani ine chinangwa chekuita bhizinesi rine pundutso.
VaMoyo vanoti hurumende yakabuda nechisungo chekuti kambani iyi itsvage mamwe makambani ane mari ekushanda nawo. Vanoti izvi zvava mumaoko egurukota rezvekutakurwa kwezvinhu, VaNicholas Goche. Studio7 haina kukwanisa kubata VaGoche kuti tinzwe divi ravo.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi, uye vari mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Coalition on Debt and Development, Va Masimba Kuchera, vanoti zviri kuitika ku Air Zimbabwe zvinoratidza kuti kambani iyi haichakwanisa kuita basa rayo yega.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti Air Zimbabwe iri kurasikirwa nemari inoita mamiriyoni matatu nemazana matatu ezviuru zvemadhora pamwedzi. Kambani iyi inoda mari inosvika mazana mashanu ezviuru zvemadhora pamwedzi yekubhadhara vashandi vayo.
Imwe ndege yeAir Zimbabwe yakambobatirwa chikwereti muLondon nekambani yemu America inotengesera Air Zimbabwe zvinhu zvekushandisa pakugadzirisa zvinenge zvafa pandege.
Pari zvino Air Zimbabwe haisi kuenda kuLondon nekuSouth Africa sezvo iri kutya kuti ndege dzayo dzinogona kubatwa nemakambani aine zvikwereti nawo sezvakaitika kuLondon muna Zvita.
Hurukuro naVa Jonathan Kadzura
Hurukuro naVa Gorden Moyo
Tererai Hurukuro naVa Masimba Kuchera